Ajụjụ - Shanghai Yangli Ngwongwo Ihe Co., Ltd.
Ajụjụ & Azịza
1. you na erekwa ụlọ ọrụ ma ọ bụ na-emepụta ihe?
Anyị bụ ndị a ọkachamara ngwá ụlọ ngwaike emeputa kemgbe 1999.
2. Olee otú ịtụ?
Biko zitere anyị iwu ịzụta gị site na Email ma ọ bụ Faksị, ma ọ bụ ị nwere ike ịjụ anyị ka anyị zitere gị akwụkwọ ọnụahịa Performa maka iwu gị. Anyị kwesịrị ịma ozi ndị a maka iwu gị:
1) Ihe omuma ahia: Otutu, nkọwapụta (nha, ihe onwunwe, agba, njirimara na ngwugwu achọrọ), Artwork ma ọ bụ Sample ga-adị mma.
2) Oge ezipụ chọrọ.
3) Mbupu ozi: Company aha, Adreesị, Nọmba ekwentị, Ebe ọdụ ụgbọ mmiri / ọdụ ụgbọ elu.
4) Forwarder si kọntaktị nkọwa ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na China.
3. Kedu usoro dum maka azụmaahịa anyị?
1. Akpa, biko nye nkọwa nke ngwaahịa na ị chọrọ anyị na-aguputa gị.
2. Ọ bụrụ na ọnụahịa na-anabata ma ahịa mkpa sample, anyị na-enye Performa Akwụkwọ ọnụahịa maka ahịa ndokwa ịkwụ ụgwọ maka sample.
3. Ọ bụrụ na ndị ahịa kwadoro ihe atụ ma chọọ maka iwu, anyị ga-enye akwụkwọ ọnụahịa Performa maka onye ahịa, anyị ga-eme ndokwa imepụta ozugbo mgbe anyị nwetara nkwụnye ego 30%.
4. Anyị ga-eziga foto nke ngwongwo niile, mbukota, nkọwa, na oyiri B / L maka ndị ahịa mgbe emechara ngwongwo. Anyị ga-edozi mbupu ma nye B / L mbụ mgbe ndị ahịa na-akwụ ụgwọ.
4. Enwere ike ibipụta logo ma ọ bụ aha ụlọ ọrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ngwugwu?
Chọpụta. A ga-ebipụta njirimara gị ma ọ bụ aha ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa gị site na ịpị stampụ, mbipụta, ịmịpụta ihe ma ọ bụ ihe mmado. Ma MOQ ga-abụrịrị bọl na-ebu slide karịa 5000 set; zoro ezo slide n'elu 2000 tent; abụọ drawer slide n'elu 1000; na-ekpo ọkụ oven n'elu 10000 set; kabinet adabere n'elu 10000 PC wdg
5. Kedu usoro ịkwụ ụgwọ gị?
Kwụ <gwọ <= 1000USD, 100% n'ọdịnihu. Mentkwụ >gwọ> = 5000USD, 30% T / T tupu, itule tupu shippment.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọzọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị na E-mail: yangli@yangli-sh.com.
6. Olee uru ndị anyị nwere?
1. Jighiri QC:Maka usoro ọ bụla, ngalaba QC ga-enyocha nyocha zuru oke tupu ibupu ya. Omume ọjọọ ga-ezere n'ime ọnụ ụzọ.
2. Mbupu: Anyị nwere ngalaba mbupu na ebugharị, yabụ anyị nwere ike ikwe nkwa ịnyefe ngwa ngwa ma mee ka echekwa ngwongwo ndị ahụ.
3. Anyị factory ọkachamara mmepụta zoro ezo drawer slide, bọl agba slide, table slides na oven adabere kemgbe 1999.
7. Gini mere nnochi eji jie nfe enweghi ike iru oru?
Ihe kpatara eji arụ ọrụ slide na-arụ ọrụ na-esitekarị n'ihe ndị na-esonụ n'oge nrụnye, biko nyochaa dịka usoro ndị a:
(1) Lelee Oghere Akụkụ (Nwepu).
Buru ụzọ lelee oghere dị n'etiti ụlọ ọrụ na drawer dị n'ime ndidi. Biko rụtụ aka na kwekọrọ ekwekọ ngwaahịa n'akụkụ ohere (nwechapụ) ntụziaka na ngwá ụlọ, Kitchen ngwa peeji. Biko kpọtụrụ kabinet onye ma ọ bụrụ na kabinet n'akụkụ ohere (nwechapụ) bụ 1mm ukwuu ka ẹkedọhọde n'akụkụ ndidi.
(2) Nyochaa etu ụlọ ahụ si arụ ọrụ na drawer ya.
Ọ bụrụ na ndị ezi uche ndidi nke n'ezie n'akụkụ ohere (nwechapụ) bụ n'ime 1mm, biko soro nchọpụta nsogbu nduzi kụziere kabinet nnyocha iji hụ na kabinet ewu izi ezi nke kabinet. Kabetị na drọwa ahụ kwesịrị ịdị n ’akụkụ zuru oke na akụkụ anọ. Ọ bụrụ na drawer ma ọ bụ kabinet ahụ abụghị ihe yiri ya ma ọ bụ dị na diamond, ọ ga-emetụta arụmọrụ slide dị nro.
(3) Lelee drawer slide nwụnye
Iji hapụ drawer na kabinet, pịa taabụ ịhapụ ndị dị n'ime wee dọpụta drọwa ka hapu. Gbaa mbọ hụ na akụkụ etiti na mpụta nwere ihe jikọrọ ya na imebi ya, ma etinyekwara akụkụ ahụ dị n'ime megide drawer n'ihu panel nke ọma ma mee ya nke ọma. Nkọwa drawer slide ga-emetụta arụmọrụ slide ahụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-ezute ihe niile achọrọ edepụtara n’elu, yana nsogbu ahụ ka dị, biko egbula ịkpọtụrụ anyị, a ga-ekenye onye ọkachamara inyere gị aka.
N'ihi na kabinet complies na n'elu chọrọ ma ka na-ada na-arụ ọrụ nke ọma, biko kpọtụrụ anyị maka inwekwu ọkachamara aka.
8. Gịnị mere inupụ emeghe slide nwere obere ejection anya, ma ọ bụ enweghị ike ịrụ push imeghe ọrụ?
Ihe Ntugharị Push Open agaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na oghere n'akụkụ (nwechapụ) si na ndidi a kapịrị ọnụ. Biko rụtụ aka na ngwaahịa ozi na Ngwongwo Kitchen Ngwa Page.
9. Kedu ka m ga esi edozi mkpọtụ maka slide emeghe emeghe?
Akpa elele slide n'etiti na mpụta so arụnyere ma kwekọọ megide kabinet mgbidi. Mgbe awụnyeghị ihe mmịfe ahụ, mkpọtụ ahụ nwere ike ịpụta site na nnyonye anya usoro, si otú a mee ka ebe nkwụsị slide ahụ dị mkpụmkpụ.